Marxaladdii Manaahijta: 1978 wixii ka dambeeyay waxaa la galay marxaladda manaahijta oo qof waliba uu la shaqeeyo dadka ay isku aragtida yihiin dhinaca dacwada, taasoo dhammaan ah ijtihaad ay u arkaan in uu yahay sida ugu wanaagsan ee loo soo celin karo ku dhaqanka shareecada islaamka. Marka la leeyahay manhaj waxaa loo jeedaa sida ugu toosnaasho badan uguna dhow kitaabka iyo sunnada oo loogu soo celin karo shucuubta muslimiinta ku dhaqanka diintooda oo sida aan hore u soo sheegay dagaal aad u culus lagu qaaday si looga tirtiro diinta ummadda muslimiinta, xusuusnoow hadalkii Zuwemmar uu yiri kontomeeyadii “Islam is a dying religion” islaamku waa diin sii dhimanaysa.
Waxaa intaa weheliyey culimo xalqooyin wax ku akhriya oo soo saara dad ka dhaxla cilmiga waligoodna ka jiri jiray meelkasta oo iyaga aan ku xirneeyn dhaqdhaqaaq islaami sida aan horay u soo sheegay. Sidoo kale waxaa jiray xarumo ay leeyihiin dariiqooyinka suufiyada ee kala geddisan oo inta badan ku wajahan tarbiyada ruuxiga ah iyo siyaarooyinka quubuuraha owliyada, sida xarunta Sh. Nuur xusseen ee ku tiillay baladulkariim oo ku dhow jilib, Aw barkhadle oo ku tiil Hargaysa meel u dhow,Ruun sheelo Gaalkacyo,Rabiiciyada Garowe, Sh. Murjaan, Sh.Aways biyooleey, Sh. Abdullahi Baardheere oo kuyaalay Luuq, xarumaha qaadiriyada, axmadiyada, saalixiyada oo ku lahaa magaalo kasta xarun ama wakiil, iyaga dhexdoodana uu ka dhexeeyay dagaal culus, sida qaadiriyada dhihi jirtay “boqol gaal in la dilo waxaa ka ajar badan hal nin oo saalixiyo ah oo la dilo”,sababtoo ah daraawiishtii oo dariiqada saalixiyada ahaa ayaa dilay Sh.Aways alqaadiri, kuna dilay halka loo yaqaan biyooley oo ku taal magaalada Tiyeeglow. Waxaan dadkoo dhan u sheegayaa waa cadaalad in la sheego qofka wixii khayr ah oo uu leeyahay, waxaan laga yaabaa hadal uu yidhi Sh. Islam Ibnu Taymiyah oo macnihiisu ahaa dhibka wuxuu kayimaadaa in aan la sheegin qofka waxa khayrka ah ee uu leeyahay.
1979 anigoo madax u ah layli saraakiishii xarakada kaga jirtay kulliyadda dagaalka, ayaan suudan u soo baxay galab khamiis ah oo ardada la fasaxo si ay u soo noqdaan galabta jimcaha ah, inteenna wadaadada ah waxaan isla degi jirnay hal hotel,waxaanna soo gadan jirnay wixii cusub ee kutub ama joornaal cusub ah kuna saabsan dhaqdhaqaayada islaamka sida majallada almujtamac, aldacwah oo ay soo saaraan dhaqdhaqaaqa ikhwaanul muslimiin allaha ka abaalmariyo raga wax ku qori jiray aad ayey noo anfaceen. Anoo marayo maxadada dhexe ee khartuum,masjid jaamaca wayn ee Khartuum wadaad wacdinayo oo lagu hareeraysanyahay, safkii ayaan dhinac ka galay, wuxuu ka hadlayaa sida loo duugo maydka iyo bidcooyinka lagusoo daray,iyo dadka waxa ay sameeyaan,waxaa aad iisoo jiitay ,waxkasta oo aan samaynayno waa in quraanka lagaa helaa ama xadiiska ama hadalkii salafka saxaabada,taabiciin,taabicutaabiciin imaamyadii haddii kale waa baadil, markaasuu su’aal kastoo la weeydiiyo wuxuu keenaa daliil ama athar,wuxuu ahaa sheikh ka tirsan Ansaru sunnah reer suudaan.
Golaha shuurada waxay go’aansadeen in la diyaariyo ummada lagana saxo qallooca caqiidada oo sabab u ah qallooc kasta oo ku dhaca dadka ama ummadda. Sida nabiga 13-kii sano ee ugu horreeyay dacwadiisa uu u saaray caqiidada. Sida uu yidhi imam maalik:” ummaddaan inteeda dambe waxa hagaajin karaa wixii hagaajiyay inteedii hore”.Waxaan xaqiiqsannay in aanay fari ka qodnayn mashruuca islaamiga ee soomaaliya,raga qaar waxay lahaayeen labaatanka sano ee soo socota yaan laga hadlin waxaan dacwo ahayn. Dowladda:
Allah subxaana watacaalaa ajar haka siiyo Sh Abdirahman taariikhdaan qiimaha iyo qaayaha leh ee uu naga siiyey Somalia iyo saxwaddii diinta.
Waxaan ku raacsanahey walaalihii iga horeeyey in taariikhdaan laga dhigo Book dhaxalgal ah oo umadda u noqda marjic taariikheed.
Xaqiiqatan qofkii akhrista oo maanta waxa jira u barbardhiga waxaa u soo baxeysa kaaf iyo kala dheeri, waana danta aad ka lee dahey qoraalkaaga yaa Shiikhanaa.
Waxaan kula talin lahaa cid kasta oo akhrista in ay u gudbiyaan asxaabtooda si ay iyaguna uga faaiideystaan kheyrkaan.
Waxaan mar labaad iyo mar sadexaadba u mahadnaqayaa Allah oo sahley in aan helno qoraalkaan. Waxaan kaloo u mahad naqayaa Sh Abdulrahman Sh Omar.